Wendy Covey's Amanqaku Martech Zone |
Amanqaku ngu Wendy Covey
Kule minyaka ingama-20 idlulileyo, uWendy uncede amakhulu eenkampani zobuchwephesha ukwakha ukuthembana kunye nokuzalisa imibhobho yokuthengisa besebenzisa umxholo wobugcisa onyanzelisayo. Inkampani yakhe, UTREW wentengisoI-arhente yentengiso epheleleyo enceda iinkampani ukunxibelelana nabathengi, ukwakha ukuthembana, kunye nokuqhuba iziphumo ezizinzileyo kusetyenziswa indlela yokuthengisa umxholo eqinisekisiweyo.
Ngaba ufuna uncedo lokuThengisa kubaphulaphuli bobuchwephesha? Qala apha
NgeCawa, ngoFebruwari 7, 2021 NgeCawa, ngoFebruwari 7, 2021 Wendy Covey
Ubunjineli ayisiyongcali kangako njengendlela yokujonga umhlaba. Kubathengisi, ukuthathela ingqalelo le ndlela xa bethetha nabaphengululi bezobuchwephesha abangaqondiyo kunokuba ngumahluko phakathi kokuthathwa nzulu nokungakhathalelwa. Oososayensi kunye neenjineli banokuba ngabaphulaphuli abanzima ukuqhekeka, nto leyo ebangela ukuba uMbuso weNtengiso kuNgxelo yeeNjineli. Kunyaka wesine ngokulandelelana, ukuthengisa kwe-TREW, egxile kuphela kwintengiso kubuchwephesha